The Xiaomi Mi MIX 4 ga-eweta na Septemba 24 na eze | Gam akporosis
A ga-enye Xiaomi Mi MIX 4 na MIUI 11 n'otu ụbọchị
Xiaomi Mi MIX 4 bụ otu n'ime ụdị kachasị atụ anya ke mme akpatre ọfiọn̄ emi. Dị ahụ gosipụtara n'oge gara aga na ihe nlereanya a ga-abata n'ahịa n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọzọkwa, enwere asịrị banyere ya ruo izu, dị ka ga-eji igwefoto 108 MP. Mana ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ihe ekwenyela na nke a dị elu nke akara ndị China.
Ekpughewo ugbu a Kedu ihe ga-abụ ụbọchị ngosi nke Xiaomi Mi MIX 4. Ihe ngosi nke ga-adaba na ngosipụta nke MIUI 11, ụdị ọhụrụ nke oyi akwa nhazi nke akara ndị China. Ọ ga-abụ n’ọnwa a ka anyị ga-ahụ ha.
Dika ozi ohuru nke biara, nke Xiaomi Mi MIX 4 a ga-enyefe eze na September 24. N'otu ụbọchị ahụ na otu ihe omume ahụ, a ga-egosikwa MIUI 11, ụdị ọhụụ nke nhazi nke nhazi. O doro anya na ụdị a ga-abata MIUI 11.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, n'ihe na-erughị izu atọ anyị ga-amaworị nke a dị elu nke akara ndị China. Na mgbakwunye, ekwuru na na ihe omume a enwere ike ịnwe ụdị ọzọ, nke ga-abụ Xiaomi Mi 9 5G, ihe nlere ozo nke anyi na enweta ọtụtụ akụkọ n'izu ndị a odikwa ka oga adi na oru n’oge na adighi anya.
Ka o sina dị, enweghị nkwenye gọọmentị nke akara ndị China. Mana asịrị na a ga-eweta ihe ngosi Xiaomi Mi MIX 4 a na Septemba 24 na-enweta ike. Yabụ na ọ bụ ụbọchị anyị ga-eburu n'uche, ebe ọ bụ na o yikarịrị ka a ga-eme mmemme a na ya.
Anyị ga-elebara anya na akụkọ ọhụụ gbasara ngosi a. Nkwa ekwere ihe omume nke jupụtara n'akụkọ site n'aka onye na-emepụta China, nke doro anya na-achọ ịgbasawanye igwe ekwentị ya na ngalaba dị iche iche. Xiaomi Mi MIX 4 ga-abụ ihe nlereanya ọhụrụ n'ogo ya dị elu, nke afọ a karịa karịa ka ọ dị na ekwentị ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A ga-enye Xiaomi Mi MIX 4 na MIUI 11 n'otu ụbọchị